अर्थतन्त्रमा कुन क्षेत्रको योगदान कति ? विगत १० वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यस्तो छ – जुगल टाईम्स
Posted on २१ बैशाख २०७७, आईतवार १८:४५ Author जुगल टाईम्स	Comment(0)
नेपालको अर्थतन्त्रमा कुन क्षेत्रले कति योगदान दिएको होला ? यसमा सबैको चासो हुनु स्वभाविक हो ।
यस विषयमा अध्ययन गर्ने सरकार मातहतकै एक संस्थाले कुन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा कति योगदान छ भनेर एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कोरोनाको कारण धेरैजसो क्षेत्रको योगदान बढ्ने संकेत देखिएको छैन ।
यद्यपि पछिल्लो समय कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढेर भने गएको छ । चालु वर्ष यो क्षेत्रको योगदान ५८.८ प्रतिशत हुने सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ । यस क्षेत्र अन्तर्गत थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट तथा व्यावसायीक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक, सामाजिक सेवा पर्दछन् ।
यस क्षेत्र अन्र्तगतको होटल रेष्टुरेन्ट तथा हवाई यातायातमा कोभिड महामारीले प्रत्यक्ष असर गरेकाले अर्थतन्त्रमा यसको योगदान घट्ने आंकलन केन्द्रिय तथ्यांक विभागको छ । यता कृषि बन, मत्य तथा खानी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा २८.२० प्रतिशत योगदान रहेको छ ।
यो योगदान केही घट्ने देखिएको छ । धान उत्पादनमा आएको कमी र कोरोनाले आपूर्ति व्यवस्था सहज नहुँदा कृषि उत्पादन घट्ने देखिएको छ । विद्युत ग्यास पानीले कम योगदान दिएको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रले १.४१ प्रतिशत योगदान दिने आंकलन छ । यता निर्माण क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा ७.२३ प्रतिशत योगदान दिएको छ ।
कुन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा कति योगदान छ ?
वि.सं. २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि नेपालमा २.७५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर भएको थियो । यो ०६३÷०६४ को आर्थिक बृद्धिदर हो । त्यस्तै २०६४÷०६५ मा आर्थिक बृद्धिदर ह्वात्तै बढेर ५.८ प्रतिशत पुगेको त्यसयता सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा आर्थिक बृद्धिदर ७.७४ प्रतिशत भएको थियो ।
कुन आर्थिक वर्ष कति वृद्धि भयो ?
महामारी नियन्त्रणका लागि १३ अर्ब अतिरिक्त बजेट माग्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय
Posted on ६ बैशाख २०७७, शनिबार ११:२८ Author जुगल टाईम्स
बजेट माग गरेको छ। मन्त्रालयले कोरोना जस्तै भविष्यमा आउने माहमारी देखिएमा त्यसको नियन्त्रणका लागि अतिरिक्त बजेट मागेको हो। बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाईमा सिंहदरबारमा भएको आगामी वर्षको बजेटसम्बन्धी छलफलमा स्वास्थ्यले कोरोना नियन्त्रणका लागि सिलिङबाहेक अतिरिक्त १३ अर्ब चाहिने खाका प्रस्तुत गरेको हो। प्रस्तावमा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सकारात्मक देखिएको बताइएको छ। योजना आयोगले […]
Posted on २१ बैशाख २०७७, आईतवार १०:३५ Author जुगल टाईम्स
उत्तरी कश्मिरको हन्दवाडामा आतंकवादी समूहसँग शनिबार साँझदेखि भएको भिडन्तमा सेनाको २१ राष्ट्रिय राइफल्सका कमान्डिङ अफिसर आशुतोष शर्मासमेत पाँच जना सुरक्षाकर्मीको निधन भएको छ । मुठभेडमा सेनाको गोली लागेर दुई जना आतंकवादीको पनि मृत्यु भएको छ । आतंकवादी लुकेको सूचनाको आधारमा उत्तरी कश्मिरको एक घरमा सुरक्षाबलले आक्रमण गरेका थिए । आतंकवादीले घरका सदस्यलाई बन्धक बनाएका थिए […]
Posted on २ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १९:४८ Author जुगल टाईम्स
बाँकेको नेपालगञ्जस्थित जमुनाह सीमा नाकाबाट गए राति प्रवेश गरेका तीन जनामा आरडिटी पोजेटिभ देखिएको छ । जमुनाहा नाकाबाट भित्रिएका विभिन्न जिल्लाका ४६६ जनामा आरडिटी गर्दा सुर्खेत, कालीकोट र नुवाकोट जिल्लाका तीनमा पोजेटिभ देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार आरडिटी पोजेटिभ देखिएका तीनै जनाको पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाब […]